Mila harenin-kasina !
Misy ilay fomba fiteny frantsay izay hoe “Sahaza antsika izay mpitondra azontsika.” Ireo mpanandro sy mpanao hatsarana na mpisikidy na mpimasy hatramin’ny mpitondra fivavahana dia samy mino ny fisian’ny ozona avokoa.
. Na inona na inona hadisoan’ny mpitondra dia nisy ny ezaka sy ny fanamby ka nahatontosana izany hatramin’ny farany, ary mendrika hiderana azy ireo izany. Azo lazaina ho nandresy ny fanjakana na dia maro aza ny tsy fangaraharana izay tokony hanompanana ny ady hevitra sy hitakiana ny rariny aoriana. Araka izany, tsy tokony hifaly na hirehareha be fahatany izy ireo fa kosa hamoaka ny marina rehetra sy hanaporofo amin’ny antsipiriany ny tena tombotsoam-bahoaka tamin’iny fihaonana iny. Lesona ho an’ny mpanohitra ihany koa anefa ireny ary tokony hametraka fanamby izy ireo fa afaka mahavita zavatra tsara kokoa noho ny vitan’ny mpitondra, fa tsy lany andro mivazavaza etsy sy eroa ka mba ny asa no hitsaran’ny besinimaro azy ireo manomboka izao. Nitondra fiovana teto amintsika ny fisian’iny fivoriana iraisam-pirenena iny na dia hiviny kely aza ny an’ny vahoaka, indrindra fa teto Antananarivo. Ny hirariana dia ny hitohizan’ny ezaka sy hisian’ny fiaraha-mientana eo amin’ny mpitantana ny tanàna sy ny fitondrana foibe, ka tsy ho fandraisan’andraikitra vonjy tavanandro araka ny fijerin’ny rehetra no natao fa mba hitohy hatrany. Zava-poana rahateo ny dingana efa vita raha toa hihemotra sy hiverina amin’ny nisy teo aloha toy ny fahalotoan’ny tanàna sy fikorontanana isan-karazany. Fanamafisana sy fanohizana izay tsara ary fanarenana ny lesoka no tokony hatao mba tsy ho voaporofo hoe haingo ambony tsikoko no natao teto!